ဝေဖန်သူတွေကြောင့် ဘာမှမလုပ်တော့ သီလရှင်ဝတ်ရင်ကောင်းမယ် ဆိုတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ - Cele GabarCele Gabar
ဝေဖန်သူတွေကြောင့် ဘာမှမလုပ်တော့ သီလရှင်ဝတ်ရင်ကောင်းမယ် ဆိုတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
Published: November 16, 20186:19 pm
သက်ငယ်မုဒိန်းမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မအူပင်မြို့မှာနေတဲ့ အသက် (၁၉) နှစ်သာရှိသေးတဲ့ မစမ်းစမ်းမော် အတွက် အိမ်တိုင်ရာရောက် အစစအရာရာကူညီဆောင်ရွက်နေတဲ့ မခိုင်နှင်းဝေရဲ့ ရေးသားချက်တစ်ခုကြောင့် လူတစ်ချို့က ပြစ်တင်ဝေဖန်ပြောဆိုခံနေရတာပါတယ်။
ခိုင်နှင်းဝေ ရဲ့ ရေးသားချက်ဟာ နစ်နာသူ ကလေးမလေးကို တနိုင်ငံလုံးက ယောက်ျားတွေ မုဒိန်းကျင့်သလိုမျိုး ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောဆိုဝေဖန်ခဲ့တာပါ. ခိုင်နှင်းဝေကတော့ ” ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်နေလဲ အများအကျိုး ဆောင်ရွက်နေလဲ အဖျက်တွေအမျိးမျိုး ဝင်နေပါလား..ဘာမှမလုပ်တော့ပဲ သီလရှင်ဝတ်မှနဲ့တူတယ်နော်..တခါတခါ စိတ်ပျက်မိတာအမှန်ပဲ..ရှေ့ဆက်လျှောက်ဖို့ တော်တော်အားပြန်ယူယူနေရတယ်..ဘာဆက်လုပ်သင့်လဲ အကြံဥာဏ်လေးပေးကြပါအုံးရှင်..ကျမရေးတဲ့အထဲဘာများအမှားပါလို့လဲရှင်..” လို့ ပြောဆိုချက်တွေကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ဝဖေနျသူတှကွေောငျ့ ဘာမှမလုပျတော့ဘဲ သီလရှငျဝတျရငျကောငျးမယျ ဆိုတဲ့ ခိုငျနှငျးဝေ
သကျငယျမုဒိနျးမှုတဈခုဖွဈတဲ့ မအူပငျမွို့မှာနတေဲ့ အသကျ (၁၉) နှဈသာရှိသေးတဲ့ မစမျးစမျးမျော အတှကျ အိမျတိုငျရာရောကျ အစစအရာရာကူညီဆောငျရှကျနတေဲ့ မခိုငျနှငျးဝရေဲ့ ရေးသားခကျြတဈခုကွောငျ့ လူတဈခြို့က ပွဈတငျဝဖေနျပွောဆိုခံနရေတာပါတယျ။
ခိုငျနှငျးဝေ ရဲ့ ရေးသားခကျြဟာ နဈနာသူ ကလေးမလေးကို တနိုငျငံလုံးက ယောကျြားတှေ မုဒိနျးကငျြ့သလိုမြိုး ဖွဈနတေယျလို့ ပွောဆိုဝဖေနျခဲ့တာပါ. ခိုငျနှငျးဝကေတော့ ” ကောငျးမှုကုသိုလျတှလေုပျနလေဲ အမြားအကြိုး ဆောငျရှကျနလေဲ အဖကျြတှအေမြိးမြိုး ဝငျနပေါလား..ဘာမှမလုပျတော့ပဲ သီလရှငျဝတျမှနဲ့တူတယျနျော..တခါတခါ စိတျပကျြမိတာအမှနျပဲ..ရှဆေ့ကျလြှောကျဖို့ တျောတျောအားပွနျယူယူနရေတယျ..ဘာဆကျလုပျသငျ့လဲ အကွံဉာဏျလေးပေးကွပါအုံးရှငျ..ကမြရေးတဲ့အထဲဘာမြားအမှားပါလို့လဲရှငျ..” လို့ ပွောဆိုခကျြတှကေို ပွနျလညျဖွရှေငျးထားတာကိုတှရေ့ပါတယျ။
Previous Previous post: “တောင်ကြီးမြို့မဈေးရှေ့ ဗုံးလန့်မှု မှာ ကံကောင်းလို့ ဒုက္ခ မရောက်ခဲ့တဲ့ မိုးစက်ဝိုင်”
Next Next post: ဘယ်သူခွဲခွဲ တို့မကွဲ ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ ဂျီဖတ် ( G Fatt)
၂၀၁၉ ဇန်န၀ါရီလမှာ မင်္ဂလာပွဲကျင်းပတော့မယ်ဆိုတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
Published: December 8, 20184:21 pm
Habits That Make You Earn Less
Published: January 23, 20198:25 pm
Star Award ကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေကို နှစ်သိမ့်လိုက်တဲ့ ဇေရဲထက်
Published: March 18, 201911:54 am Updated: 11:56 am
ရေခဲတောင်မှာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနေရတဲ့အတွက် မိသားစုတွေနဲ့ အဆင်အသွယ်ပြတ်နေကြတဲ့ အနုပညာရှင်များ
Published: March 6, 20196:15 pm
ချစ်ဇနီးအတွက်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာပုံလေးတစ်ပုံကို နှလုံးသားနဲ့ရေးဆွဲပေးခဲ့တဲ့ ဆန်းထွဋ်
Published: February 23, 201911:54 am
သြစတေးလျပြန်တဲ့နေ့မှာ သားလေးအတွက် စာလေးတစ်စောင်ချန်ခဲ့တဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုး
Published: February 22, 20193:22 pm
STAR AWARDS အတွက် ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်မင်းသားဆု ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ?
Published: April 4, 20193:59 pm